Management Courses | king
STUDY with KING
လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Certificate in Business Management
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ? သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒါတွေနားလည်မှအပြောင်းအလဲများတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိမှာပါ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သီးသန့်စီစဉ်ထားသော Certificate in Business Management သင်တန်းအတွက်စတင်စာရင်းပေးသွင်းအပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
Level 2: Manage your business (46 hours)
(Practical Approach to Managing Small and Medium-Sized Businesses)
1. Principles of Management – စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရားများ
2. Managing Finance – ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
3. Managing the Markets – ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
4 . Managing Manufacturing & Operation
5. Managing Human Resource – လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဘာသာရပ်၅ခုကိုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ခြုံမိအောင်သင်ကြားပေးပါမည်။
OBM Workshop Series တွင်
Level 1: Start လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်း
Level 2: Manage လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Level 3: Grow လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း
သင်တန်းကာလမှာနာရီ (၄၆) ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်မှုရရှိ်လိုသူများ Company များတွင် Marketing စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်လုိုသူများ Company များတွင် Marketing Manager/sales လုပ်လိုသူများ Management Level တွင်လက်ရှိလုပ်နေသူများနှင့် Management Level သို့တက်ရောက်လိုသူများ
သင်တန်း Course များမှာ Basic Marketing Knowledge ( အခြေခံ Marketing စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ )
21st Century Marketing Plan & Strategies ( ခေတ်သစ် Marketing သဘောတရားနှင့်နည်းဗျူဟာများ )
Creating Successful long term growth with consumer communication ဖောက်သည်များအား ကြာရှည်ခိုင်မာစွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ
E-Commence နှင့် Social Marketing ( ပြည်သူ့အခြေပြုဈေးကွက် ရှာဖွေခြင်းနှင့် Online business ဆိုင်ရာနည်းနာများ )
အားသင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Marketing နယ်ပယ်မှ သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ တစ်နို်င်တစ်ပိုင်အိမ်တွင်းမှုစီးပွားရေးကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ အားလုံးတက်ရောက်သင့်သောသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်း Course အတွင်းလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အောင်မြင်မှုရရှိနေသော ၀ါရင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ MBA ဘွဲ့ရရှိထားပြီးသော နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိဆရာ/မများ မှ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
© 2017 by King Group Institute Powered by Strength Value.